Oromo Protests Continues – July 19, 2020 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOromo Protests Continues – July 19, 2020
How Oromo pedestrians are treated on the streets of Finfinne? This video is an example
Source: Irbuu Shinniiggaa
Abiy Haamad sirna abbaa irrummaa Itoophiyaa irratti diriirsuuf irriba dhaba. Kanaaf sagal Asmaraatti deddeebi´a. Moodeela sirna abbaa irrummaa Asmaraa jiru Shaggaritti fidee hojiirra oolchuuf dhama´a. Waan namni kun hubachuu dadhabe tokko itti himna. Moodeelli abbaa irrummaa Isaayaas Afawarqii kan Asmaraatti hojjete Itoophiyaa irratti, keessattuu Oromiyaatti gonkumaa hin hojjetu. Sababa isaa ibsuun ni danda´ama.
Isaayaas maaluu yoo tahe qabsoo ummata Eertiraa sirna Nafxanyaa jalaa bilisa baasuuf godhame hogganee injifatee aangoo qabate. Kanaafuu hangamuu abbaa irree gara jabeessa tahullee, kaleessa qabsoo waggaa 30 keessatti tarree duraarra dhaabatee lolee lolchiisee Eertiraanota sirna Nafxanyaa jalaa baase. Kanaaf jecha lammiin biyyattii hangamuu yoo isa morme keessoo isaatti garuu Isaayaasiin ni kabajaan. Sana qofa miti. Ummanni Eertiraa lakkoofsaan xiqqoo dha. Humna waraanaa fi polisaa heddumminaan leenjisuun ummata kana ukkaamsuun ulfaataa hin tahu.
Gama Itoophiyaatti yoo deebine garuu seenaan jiru guutuutti kan Eertiraa irraa adda. Abiy OPDO dha. OPDO jechuun ammoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti maqaa badduu dha. Wayyaanee jalatti guddatee ummata keenya fixaa fi ficcisiisaa as gahe. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti gahee diinummaa malee gahee firoomaa hin qabu. Gurmuun isaa kan silaa seeratti dhihaatee adabamutu masaraa seene. Ummanni Oromoo nama Abiy jedhamu maqaa eega dhagahee reefuu waggaa 2 yookiin 3. Injifannoo qabsoo Oromootiin argame saamee aangoo ittiin qabate. Onnee ummata Oromoo keessatti diinummaadhaan beekama. Har´a ammoo caalaatti diinummaa isaa hammeessee agarsiisaa jira. Hayyuu Oromoon jaalattuu fi jala yaatu guuree hidhaatti naqeera. kaanis ajjeeseera.
Namni akkasii abbaa irree tahee humna qawweetiin saba guddaa kanarra bubbuluu hin danda´u. Yeroodhaaf nama ajjeesuu, hidhuu, ukkaamsuu fi hiraarsuu ni danda´a taha. Garaaf bultoota Afaan Oromoo dubbattu hagoo qabatee ittiin Oromoo burjaajessuu kajeela taha. Akka Isaayaasittin Itoophiyaa dhiitee bulcha jedhee hawwuus ni mala. Afaaniin tokkummaa Itoophiyaa lallabaan Oromoo fi Amaara gidduutti ibidda qabsiiseen Amaara qabadhee Oromoo dhaha jedhee fiigaas jira. Kun garuu fagoo hin deemu. Oromiyaa keessatti Oromoo qofa osoo hin taane dachiin Oromiyaa illee isa tufteetti. Umriin isaa gabaabduu dha. Gorsi inni Isaayaas irraa fudhatee Oromoo irratti raaw´achuuf fiffiigaa jiru kan umrii aangoo isaa dheeressu osoo hin taane kan gabaabsuu dha.
Oromo Protests in Diaspora August 29, 2020